PTFE Sheet Fekitori - China PTFE Sheet Vagadziri, Vatengesi
Skived PTFE Mahwendefa .001 "kusvika .250" Zvakakora
Skived PTFE Firimu machira anogadzirwa kubva kumhandara PTFE resini ayo akaumbwa, sintered, uye skived kune yakakodzera ukobvu. Ose mapepa ePTFE uye firimu anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akati wandei nekuda kwezvinhu zvakasarudzika, zvinosanganisira kupisa nemakemikari kuramba, dielectric simba uye anti-tsvimbo zvivakwa. Ose machira uye firimu zvinogona zvakare kuve chemakemikari akaiswa kune rimwe kana mativi ese maviri ehukama. Skived PTFE Firimu machira anowanikwa mune mukobvu kubva pa0 ....
PTFE Sheet 25mm gobvu
PTFE, yakapfava fluoropolymer mechnical plastiki ine yakasarudzika kuramba kune kwakanyanya tembiricha, makemikari, ngura uye kunetseka kutsemuka. PTFE inoratidzira kupisa kunoshamisa, kuomarara kuomarara, magetsi uye yakaderera kukweshera zvivakwa, ichiita icho chinhu chesarudzo kune akawanda akanyanya kupisa uye mashoma kukweshesana kunyorera. PTFE plastiki inowanika muDFA yakagamuchirwa, magetsi, magetsi, girazi-rakazara uye rinotakura mamakisi. Magadzirirwo: 100% Yakachena PTFE Sheet Ruvara: Chena Temp. Range: -350 kusvika 50 ...
PTFE Polymer Firimu Sheet Plate Ukobvu 5mm
PTFE, yakapfava fluoropolymer mechnical plastiki ine yakasarudzika kuramba kune kwakanyanya tembiricha, makemikari, ngura uye kunetseka kutsemuka. PTFE inoratidzira kupisa kunoshamisa, kuomarara kuomarara, magetsi uye yakaderera kukweshera zvivakwa, ichiita icho chinhu chesarudzo kune akawanda akanyanya kupisa uye mashoma kukweshesana kunyorera. PTFE plastiki inowanika muDFA yakagamuchirwa, magetsi, magetsi, girazi-rakazara uye rinotakura mamakisi. Magadzirirwo: * Item mamiriro: Nyowani * Dhizaini: 150mm * 150mm * 5mm kana tsika ...
PTFE Firimu Sheet Plate Ukobvu 0.5mm
PTFE Firimu Sheet inogadzirwa nekumisa PTFE resin mushure mekuumba. Iyo ine yakanakisa kugona kupesana nemakemikari ngura, uye kusakwegura, uye inogona kushandiswa pasi -180C ~ + 260C isina mutoro, uye ine yakaderera kwazvo fikisheni coefficients mune inozivikanwa solid solid. Tsanangudzo: Chigadzirwa Zita: PTFE Sheet Main Ruvara: Chena Chinyorwa: PTFE Sheet Saizi: 500 x 500 x 0.5mm / 19.7 ″ x 19.7 ″ x 0.02 ″ (L * W * T) kana tsika. Tsanangudzo: 1.PTFE inogona kushandiswa kudzvanya kuumbwa kana kubudiswa ...